JINGHPAW KASA: ဒေါက်တာဆိတ်ဖွားပြောတဲ့ ဥပဒေ အထက်က လူတွေကိုတွေ့ပြီ
ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွား ရှာပုံတော်လည်း အ်ိယောင်ဝါး နဲ့ပြီးသွားပါပြီ၊ လွတ်တော်မှာ ဆင်ဖမ်းမယ်၊ ကျားဖမ်းမယ်နဲ့ ကော်မရှင် တွေ့ဖွဲ့၊ ချုံပုတ်ထဲက လက်သီးထောင်ပြ ကြတဲ့သူရဲကောင်း တွေလည်း ယုန်နှာစေး နည်းနဲ့ပါစပ်ပိတ်သွားကြပါပြီ၊ ဘယ်သူတွေက ဥပဒေ အထက်ကလူ တွေမှန်း ပေါ်နေပြီပဲ။ ဗိုလ်သိန်းစိန်တို့၊ ဗိုလ်အောင်မင်းတို့အဖွဲ့ပဲပေါ့။
ကြည့်ကြပါကုန်၊ မြစ်ကြီးနား၊ ဂျန်မိုင်ကောင်းစစ်ရှောင်စခန်းမှ ဦးဘရန်ရှောင်ကို KIA ဟုစွပ်စွဲပြီး စ.ရ.ဖနဲ့ ရဲများက ၁၇၊ ၆၊ ၂၀၁၂ နေ့ညမှာ ဖမ်းဆီးသွားတယ်၊ လူစိတ်မရှိတဲ့ စ.ရ.ဖ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းအတိုင်း ကြားပင်မကြားဝံ့သော နှိပ်စက်မှုမျိုးစုံနဲ့ ညှင်းပန်းခဲ့တယ်။ နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာ ဖြစ်တဲ့ မြ၀တီ ရုပ်မြင်သံကြား၊ မြ၀တီသတင်းစာ (၁၃၊ ၆၊ ၂၀၁၂ နေ့ထုတ်) များမှ လည်းထုတ်လွင့်သွားတာတစ်ခါ လွင့်တာက KIA ဗိုလ်ကြီးတဲ့၊ နောက်တစ်ခါပြန်လွင့်တော့ တပ်ကြပ်ကြီးဖြစ်သွားရော၊ ဘရန်ရှောင်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်နံပါတ် တွေကလည်း ထောင်ဂဏန်းဖြစ်လိုက်၊ ယုတ္တိမရှိတာ သိရပြန်တော့ သောင်းဂဏန်းပြန် ဖြစ်လိုက်နဲ့ အိုးနင်းခွက်နင်း၊ အရူးချေးပန်းနည့်များနဲ့ ဖော်ပြသတင်းလွင့်ခဲ့တာကြားသိကြမှာပါ။
ဦးဘရန်ရှောင်ဟာ KIA မဟုတ်ပဲနဲ့ စွပ်စွခံနှိပ်စက်မှုများကို မခံစားနိုင်လို့ကချင်လူထုရဲ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုလည်း လုပ်ခဲ့တယ်၊ ဦးဘရန်ရှောင်ဟာ KIA မဟုတ်ကြောင်း တိုင်းသိပြည်သိဖြစ်ပါသည်။ KIA တာဝန်ရှိသူများကလည်း ဦးဘရန်ရှောင် KIA မဟုတ်ကြောင်း အစိုးရကို အသိပေးပြီးဖြစ်ပါသည်။ သိန်စိန်းကစလို့၊ ကချင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်၊ အခြားဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်တရားခွင်များ၊ ဖမ်းတဲ့ စ.ရ.ဖနဲ့ ရဲများပင် ဦးဘရန်ရှောင် KIA မဟုတ်ကြောင်းသိပြီးသားဖြစ်တယ်။
ဘာကြောင့် မလွတ်တာလဲ။ ပြည်သူတွေထဲကအစိုးရ ဆိုရင်တော့ ပြည်သူတွေဒီလောက် တောင်းဆိုနေမှတော့ ပြင်ဆင်တွေးခေါ်သင့်တာပေါ့။ ပြည်သူ့အသံကိုနားပိတ်ပြီးဆက်မိုက်လိုက်ကြတာ၊ တိုင်းရင်းသားတန်းတူညီမျှရေးကို ဖော်ဆောင်တဲ့ အစိုးရဆိုရင် လွတ်ပေးလောက်ပြီ။ လွတ်ဖို့လည်း လွယ်လွယ်လေးပါ။ “ဘရန်ရှောင်ကို လူမှား၊ နာမည်မှားနဲ့ ဖမ်းမိပါတယ်၊ အားလုံးကိုတောင်းပန်းပါတယ်” ဆိုတာနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ ကျေနပ် ထောက်ခံမှုရမှာ ပေါ့။ ကချင်လူမျိုးတွေဆိုပိုပြီးမှတောင် ခွင့်လွတ်တတ်ကြ ပါတယ်။ ဒီအမှုကိစ္စမှာ အစိုးရအာဏာပိုင်များ မှားကိုမှားတယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေ အားလုံးသိတယ်။ မှားတဲ့လူတွေကိုယ်၌ လည်းသိပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဦးဘရန်ရှောင်သာမက ပြည်သူတွေ အပေါ်လက်နက်အားကိုးနဲ့ နှိပ်စက်ထားတာ တစ်နှစ်တောင်ကျော်ခဲ့တယ်၊ ရုံးချိန်းဆိုတာ ကလည်း အမှန်တရားထွက်ဆိုခွင့်မသာခဲ့ပါ၊ ဦးဘရန်ရှောင်ရဲ့ ရင်ဘတ်မှာ အသံဖမ်းစက်ခိုးတပ်ထားပြီး ထွက်ဆိုခိုင်းတာ တရားသလား၊ ကျွန်တော်တို့ လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေက စောင့်ကြည့် နေခဲ့တယ်၊ လွတ်ပေးဖို့တောင်း ဆိုတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒီအစိုးရ ဘယ်လိုဆက်လုပ်မလဲဆိုတာကို စောင့်ကြည့်နေတုန်း ဥပဒေအထက်က လူတွေရဲ့မျက်နှာပေါ်လာခဲ့တယ်။
မေ ၂၈၊ ၃၁၊ ၂၀၁၃ ဦးအောင်မင်းတို့အဖွဲ့ KIO နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ မြစ်ကြီးနားရောက် ခိုက်မှာ KBC ဆိုတဲ့ ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့နဲ့ သွားရောက်တွေ့ဆုံတုန်းက KBC အတွင်းရေးမှုး ကိုပြော သွားတာ “ဦးဘရန်ရှောင်ကို ၀န်ခံခိုင်းလိုက်ပါ၊ တစ်ပတ်အတွင်းပြန်လွတ်ပေးမယ်” လို့ပြောခဲ့ကြောင်းလည်း ကြားသိရပါတယ်။ ၃၁၊ ၅၊ ၂၀၁၃ ဂျန်မိုင်ကောင်း စစ်ရှောင်စခန်းမှာက KBC ရုံးမှာ ကျွံခဲ့တဲ့စကား ကိုပြန်ပြင်ပြောခဲ့တာတွေ့ရတယ်။ “ဘရန်ရှောင်ကိုတစ်လအတွင်း လွတ်ပေးမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ စစ်အစိုးရ ဆိုရင်အမိန့်နဲ့ ဒီနေ့လွတ်ဆိုလွတ်လို့ရတယ်၊ အခုကျွန်တော်တို့က စစ်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အတွက် တရားစီရင်ပြီးမှ လွတ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း” ဖာထေးပြောသွားတာ သိလိုက်ရသည်။
အဲဒီနောက်ရုံးချိန်း (၃) ခါပြန်ချိန်းတယ်၊ ဘာစစ်ဆေးချက်မှ မယူပဲရက်ရွှေ့ချိန်းတာပဲ လုပ်ခဲ့တယ်၊ ၁၈၊ ၇၊ ၂၀၁၃ ရက်နေ့မှာတော့ ဘာလျှောက်လဲချက်မှ နာကြားခြင်းမရှိပဲ၊ ရေးထားပြီးသား စာရွက်ဖတ်ပြခြင်းဖြင့် ထောင် (၂) နှစ်ချလိုက်တယ်လို့သိရသည်။
ဦးအောင်မင်းတို့ နုတ်သီးကျွံထားတဲ့အတိုင်း တစ်ပါတ်အတွင်း (၂၃၊ ၇၊ ၂၀၁၃) ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်၊ ဂျန်မိုင်ကောင်းစစ်ရှောင်စခန်း အရောက်ကိုပို့ပေး ပုံကတော့ ကောင်းမှကောင်း၊ VIP ယာဉ်တန်းနဲ့၊ ရှေ့ပြေးပြည်သူမောင်း ဥသြဆွဲသံနဲ့ဘာနဲ့၊ ဗုံမောင်းမပါတာကလွဲလို့၊ သူတို့ကိုယ်တိုင်ထောင်ကြီးကိုသွားထုတ်ပြီး ဂျန်မိုင်ကောင်းအထိပို့ပေးတယ်၊ ကောင်းလိုက်တဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့စေတနာ။ UN ရုံးက Mariam လဲပါတယ် ဆိုတော့ ဂွေးတက်အောင်ကကြပြီပေါ့။ ဦးဘရန်ရှောင်ခင်ဗျာလည်း သိကြားဘိုးတော် ဦးအောင်မင်းရဲ့ အပ်ချလောင်းနဲ့ VIP ယာဉ်တန်းမှာ (၁၀) မိနစ်လောက်လိုက်ပါလိုက်ရတယ်။ ဦးဘရန်ရှောင်ရဲ့ ဇာတာစန်းထတာများ အကျဉ်းသားဘ၀ကနေ ချက်ချင်း VIP ဖြစ်သွားတာအံ့ဘနန်းပါပဲ။
မလိုပါဘူး၊ ဦးဘရန်ရှောင်ဆိုတာ အညတြလေးပါ၊ စာမတတ်ပါဘူး၊ ဗမာစကား ကောင်းစွာနားမလည်ပါဘူး၊ ဗိုလ်ကြီးအဆင့်ကို သူတို့မို့လို့တင်မြောက်ပေးလိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ ဦးဘရန်ရှောင်ကိုလွတ်ပေးလို့ ၀မ်းမသာပါဘူး။ ဦးဘရန်ရှောင်ကိုလာပို့ရင်း ဦးအောင်မင်း စစ်ရှောင်တွေရဲ့ရှေ့မှာ အောင်ပွဲခံပြောသွား လိုက်တာက “ဦးဘရန်ရှောင်ကို တစ်ပတ်အတွင်း လွတ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့ ဂတိမတည်ရင် ကိုယ့်ကိုယ် သတ်သေ ပလိုက်မယ်” ဆိုပဲ။ လေးစားလောက်ပါပေတယ် Above the law ကြီး၊ အာဂတန်ခိုးရှင်ရယ်။ ဒီအချင်းအရာတွေကိုကြည့်ရင် ဥပဒေ အထက်မှာ ဦးသိန်းစိန်တို့၊ ဦးအောင်မင်း တို့ ရှိနေတာထင်ရှားလှပါတယ်။
နောက်ပြီး မသိလို့မေးပါရစေ၊ သမ္မတ အမိန့်တစ်ခုတည်းနဲ့ အကျဉ်းသားတွေလွတ်ပေး တယ်ဆိုတာ ဥပဒေ မှာရှိသလား? အမေရိကန်သမ္မတ မြန်မာပြည်လာတုန်းကပြောသွားတယ် “အမေရိကန် သမ္မတနဲ့တစ်ကွ အစိုးရရော၊ စစ်တပ်ရော ပြည်သူတွေခိုင်းတာပဲလုပ်ရတယ်” တဲ့။ မြန်မာ သမ္မတ ဗြိတိန်နဲ့ ပြင်သစ်ရောက်တုန်းကပြောသွားတာက “၂၀၁၃ မကုန်ခင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား အကုန်လွတ်ပေးမယ်တဲ့” ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်၊ ဒါကသူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ လက်ထဲမှာ ပဲရှိတယ်၊ ငါလွတ်ဆိုလွတ်၊ ငါဖမ်းဆိုဖမ်း အာဏာရှင်ဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားနေပြီ၊ ဒီမိုကရေစီ ဖော်ဆောင်တယ်ဆိုရင်တော့ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ တိုင်ပင်ပြီးလွတ်သင့်တာ မလွတ်သင့်တာတွေ ဆွေးနွေးစရာ မလိုဘူးလား? မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းကို သမ္မတ တစ်ဦးတည်းနဲ့ ရပ်ဆိုင်းလိုက်လို့ရပါသလား၊ ဒီမိုကရေစီဆို၊ By the people, of the people, for the people ဆိုပြီးဝန်ကြီးတွေ ပြောကြပါတယ်၊ တကယ် ဟုတ်သလား? On the people များဖြစ်မနေဘူးလား? မပြောင်းလဲသေး ပါဘူးမြန်မာရေ။ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေ ၀မ်းမသာပါဘူး၊ မြည်တမ်းဆဲပါ၊ Above the law ပုဂ္ဂိုလ်ိများ ဘယ်အချိန်ကာလအထိများ စိုးမိုးနိုင်မှာလဲ၊ ဇရာစားလို့နေ၀င်ချိန်နီးလာပြီနော် ရေချိုးရင်မှန်ကြည့်လိုက်ပါ ချိင်းအောက်အရေတွေတွန့်လို့နေပြီလေ။ တရားက၀နာ စီးဖြန်းချိန်မရပဲ မိုးလင်းမိုးချုပ် ပြည်သူတွေကိုအနိဋ္ဌပေး ဖိုးပဲကြံရွယ်နေတော့ အမင်္ဂလာနဲ့ပဲနေရမှာပေါ့၊ သတ္တ၀ါတိုင်းအတွက် အချိန်ဆိုတာစောင့်နေတယ်။
့hkau e, Brang Shawng hpe bai dat dat sai, nang mu na sai. Kam ai hku di lu ai ngu ai nan "above the law" rai nga ma ai le i? An hkau ni Padang hkrun lam n htum shi nga ma li ai.